အနက်ရောင် အိပ်မက်တစ်ခု၏ ၀ိဥာဉ်များ...: ချစ်...ချစ်....မင်းတို့ပဲချစ်ကြ...!
Posted by Pyiet Oo Aung at 2:36 AM
ဟုတ်မယ်...မဲကြီး..။ ငါလည်း အိမ်သာတက်ချင်တဲ့ အခါ အိမ်သာမရှိရင် တော်တော် ဒုက္ခရောက်တယ်...။ မတော်... မထိန်းနိုင်ရင် ဒုက္ခး))))
“ မင်းဟာမင်း မစင်စွန့်ချင်တဲ့ နေရာမှာစွန့်ပြီး”
“၀မ်းရောဂါ ဖြစ်တာ ငါနဲ့ ဘာဆိုင်လဲကွ”
“@ # $ %^_^&*!......”
“၀မ်းရောဂါ မဖြစ်ချင်ရင် ယင်လုံအိမ်သာဆောက်”
သိပ်မှန်တယ် မဲကြီးရာ မင်းရဲ့ အချစ် ဒဿနကး))
S!GN. . . . . . . . . .
It is Utterly True!
ကျနော့် အတွက်ကတော့ ချစ်တယ် ဆိုတယ် စကားတစ်ခွန်း
ကို ကျနော်တစ်ယောက်ထဲ ပြောပြီး ပြီးပြည့်စုံနေပြီ ကိုမည်း
ရာ ။ :D လာကြေကွဲပြနေတာ ။
ဘလက်ရဲ့ အချစ်က အတော်လေးမြင့်နေလားလို့ အံဖတ်ထဲက အလှတရားတွေ တောင်တွေ့နေပီလား :P အင်းအဲဒါဆို တစ်သက်စား မေတ္တာဆိုတာမျိုးကြီးလားမသိဘူးနော်... လေ့လာသွားပါတယ်.. အင်း၂ချစ်၂ မင်းတို့နှစ်ယောက်ချစ် :P
ဟင်းး...အချစ်ဆိုတာ အိမ်သာကြီးတဲ့ နေ့ လည်ထမင်းစားချိန်ရောက်တော့မယ်း).............အချစ်ဆိုသည်မှာပို့ စ်လေးတက်စ်မှပဲ ဘလော့ဂါတွေရဲ့ အချစ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေကိုသိရတော့တယ် မှတ်သားဖွယ်ရာတွေပါပဲ ကဝေနဲ့တူတဲ့ အချစ်ကတော့ တစ်ခါခါ ပျောက်လိုက် ပေါ်လိုက်နဲ့အိမ်သာတက်ချိန်တိုင်းသတိရတယ် ဟဟားး ဆိုင်လာတော့သိဘူးး အချစ်အကြောင်းသေချာသိချင်ရင် စစ်တိုက်မှဖြစ်မယ်ထင်တယ် ပါစပ်သေနပ်ပဲပစ်တော့မယ် မီးခိုးမထွက်လို့...။
အချစ်ကို လှပခမ်းနားစွာ ဖွဲဆိုထားတာကို လေ့လာသွား ပါတယ်။ စိတ်လွှတ်တော်က အခြေခံမူကြမ်းပဲ ကောင်းပါတယ်ဗျာ။ ကျနော်လည်း တစ်နေ့ ကို အခါအစိတ်လောက်တော့ ခြစ်ဖြစ်တယ်။ အဟဲ ယင်လုံ အိမ်သာတစ်လုံးတော့ ရှာရဦးမယ်။ ဟေဟေ.။
အချစ်နဲ့ပါတ်သတ်လို့ကတော့ ဘာပြောရမှန်းကိုမသိတော့ဘူး.. ကိုယ်ကချစ်ဖူးတောလဲ့.. အချစ်ဆိုတာကိုယုံတယ်.. လှတယ်လို့လဲထင်တယ်.. အဲ ကိုယ်က ခံခဲ့ရဖူးတော့လဲ.. လောကမှာ အချစ်ဆိုတာရောရှိရဲ့လားလို့တွေးမိတယ်.. ချစ်တယ်ဆိုတာက ရှိလားမရှိလားတော့မသိဘူး.. အတိုင်းအတာတစ်ခုလိုပဲထင်တယ်.. နဲနဲချစ်.. များများချစ်.. အာ... ဘာတွေမှန်းလဲသိတော့ဘူး.. ငါကိုယ်တိုင်တောင် တကယ်ချစ်ဖူးခဲ့တာဟုတ်ရဲ့လားမသိ... အချစ်မရှိလဲ ခုနေနိုင်နေတာပဲ...
ဒီအချစ်လည်း မှတ်သားစရာပါပဲ။ မမ ကိုလည်း လာဝေဖန်ပေးပါဦး :P
လုံးဝ မိုက်တယ် ဆရာရေ ...
လန်ထွက်နေတာပဲ .. ဥပမာတွေက
ယင်လုံအိမ်သာ အကြောင်း အဲလေ အချစ်အကြောင်းလာဖတ်သွားတယ် ညီလေးရေ။ :D
အင်း....မြန်မာလိုတော့ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် English လိုကြပဲလို လုပ်တော့မလဲ? "LOVE"တစ်လုံးထဲရယ်...ဒါဆို တစ်ယောက်ထဲ ပြောရမယ့်ကိန်းပေါ့...:(
အချစ်ဆိုတာ....။ မဆုံးနိုင်သော မေးခွန်း...။ မပြည့်စုံသော ဖွင့်ဆိုမှု...။ မလိုလားအပ် သော လိုအပ်ချက်...။ မဖန်တီးခဲ့သင့်သော စကားလုံး...။ အလှပဆုံး ပိုးစိုးပက်စက် လှည့်စားမှု..။ မချိမဆန့် ဝေဒ နာတစ်ရပ်...။ စောက်ထိုး မိုးမျှော် ဘ၀တစ်ခု...။ မိမိကိုယ်ကို လုပ်ကြံမှု...။ ကျောချင်းကပ်နေသော ဆန့်ကျင် ဘက်..။
တွံတေးသိန်းတန်ကြီးတော့ အခုမရှိတော့ဘူးဆိုတော့ သူ့သာမီးလေးတွေကို စစ်ထဲဝင်ခိုင်းလိုက်လေကွာ ဟတ်ဟတ်
ယင်လုံအိမ်သာကြီးကို နှာခေါင်းပိတ်ပြီး အဲလေ ယောင်လို့ အချစ်အကြောင်းရေးထားတာ အတွေးက တစ်မူကွဲထွက်နေတာပဲ။ ကိုဘလက်ရဲ့
အချစ်ကို ယင်လုံအိမ်သာလို့ တင်စားထားတာ အလွမ်းကို ဘယ်လိုတင်စားမလဲဆိုတာ သိချင်တယ်။
ဒီအကြောင်းကို ကိုဦးရေးရင် ထူးခြားမယ်ဆိုတာ သိပြီးသားပါ။ “"ချစ်တယ်" ဆိုတဲ့စကားဟာ
လူနှစ်ဦးက ပြောမှသာပြည့်စုံနိုင်မှာပါ....။” အရမ်းမှန်တယ် မောင်လေးရေ။ Blackdream ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပဲ တပုဒ်ထဲမှာ ပြုံးမိစေတဲ့ တွေးမိစေတဲ့ အချက်တွေ အများကြီးပါပါတယ်။ SOLID ပါပဲ။
A nam said...
အချစ်ဆိုတာ ယင်လုံအိမ်သာကြီးတဲ့. ဟီးးး
ဂွတ်၏..... ပြောစရာမလိုတော့ပါ.... :D
အနက်ရဲ. အချစ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေက တယ်မိုက်ပါလား။
ရေးချက်ကတော့- ကောင်းဗျာ ၊၊
လုံးဝ...လုံးဝ...လုံးဝ... မှန်ကန်သော ဒဿနဖြစ်ပါသည်..
နောက်ဆုံးမှ လာပြီးစာမူခလာပေးတာ ခွင့်လွှတ်ပါညီရေ သိတယ် မဟုတ်လား အရှုပ်တွေလုပ်ပြီး အလုပ်တွေရှုပ်နေတာ..။
ရေးပေးတဲ့ အတွက် အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်..။
[B]Genre:[/B] Action | Fantasy | Sci-Fi | Thriller
[COLOR=#0000FF]Source : [URL="http://www.scenetube.net/"]Scenetube[/URL]